I-Israel ithatha amanyathelo okunciphisa ukusasazeka kwehlabathi kweCoronavirus COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » I-Israel ithatha amanyathelo okunciphisa ukusasazeka kwehlabathi kweCoronavirus COVID-19
Airlines • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba ezizii-Hong Kong • I-Israel Iphula Iindaba • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • Safety • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Iindaba zaseMzantsi Korea • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
U-Israyeli akathathi mathuba nge Ukuqhambuka kunye nokusasazeka kwe-coronavirus COVID-19. Zininzi Iinqwelomoya ziye zarhoxiswa kwaye abaphambukeli abavela kumazwe athile abekiweyo abavunyelwe ukungena kwaSirayeli.
UCathay Pacific umise iinqwelomoya phakathi kweTel Aviv neHong Kong phakathi kwenyanga kaFebruwari 24 neyoKwindla 31. I-airline yaseHong Kong yayisele inciphisile ukuhamba kweenqwelo moya phakathi kweTel Aviv neHong Kong emva kokuqhambuka kwentsholongwane.
Ukunqunyanyiswa kwazo zonke iinqwelomoya kwakulindelwe emva kokuba iSebe lezeMpilo lakwa-Israyeli livalile onke amaTshayina, Hong Kong, Singapore kunye nabemi baseThai ukuba bangene kweli lizwe. Onke amaSirayeli abuyela ekhaya evela kula mazwe kufuneka azihlukanise ngeeveki ezimbini.
U-El Al sele emisile ngeenqwelomoya phakathi kweTel Aviv neHong Kong kude kube ngumhla wamashumi amathathu ananye ku-Matshi.
Inqwelo moya yaseKorea eyafika kwaSirayeli yayinabemi baseKorea abangama-200 kwibhodi kunye namaSirayeli alishumi elinesibini. Inqwelomoya yayimiswe kude ukusuka kwisakhiwo, kwaye abakhweli bakwa-Israeli bathunyelwa kwigumbi lokuhlaliswa bodwa iintsuku ezilishumi elinesine. Abakhweli baseKorea banqatshelwe ukungena elizweni nasemva kokuba icociwe inqwelomoya kwakhona, kwafuneka benze uhambo lweeyure ezilishumi elinambini ukubuyela eSeoul kunye nabasebenzi abachongiweyo.
Umoya waseKorea uqhuba iinqwelomoya ezine ngeveki phakathi kweSeoul neTel Aviv. Ezi nqwelomoya ngoku ziya kuthi zinqunyanyiswe, njengazo zonke iinqwelomoya phakathi kuka-Israyeli ne-China ne-Hong Kong.
Okwangoku, akukho myalelo ngokubanzi malunga noMzantsi Korea, kodwa abakhenkethi baseKorea ngoku kwa-Israyeli kuya kufuneka bangene bodwa iintsuku ezilishumi elinesine, njengoko ama-Israyeli abuya eSouth Korea. Umyalelo uye wandiswa ukuba ugubungele abakhenkethi bakwa-Israeli ababebuya eJapan, eMacau, eSingapore naseTaiwan. Umlawuli we-Israel Incoming Tour Operators Association u-Yossi Fattal uxelele amalungu ombutho ukuba amaqela avela e-South Korea, eJapan nase-Taiwan acwangcisa ukhenketho kwa-Israyeli kufuneka aziswe ngoko nangoko ukuba ukhenketho lurhoxisiwe.
Icandelo loMphathiswa Wezempilo kwa-Israyeli lizama ukufumanisa ukuba i-COVID-19 ibambekile na kwa-Israyeli ngenxa yotyelelo lwabakhenkethi baseKorea abafunyaniswe benayo xa bebuyela eKorea. Ubulungiseleli bupapashe uhambo lwabakhenkethi baseKorea kunye nezikhokelo zabo banokuthi badibane nabo.
IJapan neTaiwan bongezwe kuluhlu lwamazwe apho uMphathiswa Wezempilo ethintela ukungena kwabantu bamanye amazwe kwa-Israyeli. Abahlali bakwa-Israyeli abachitha ixesha kula mazwe baya kucelwa ukuba bangene bodwa xa bebuyela kwa-Israyeli. Uluhlu ngoku lubandakanya iTshayina, iHong Kong, iSingapore kunye neThailand. Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho lazise iiarhente ukuba kufuneka barhoxise ukhenketho kwa-Israyeli ngabahlali baseJapan nakwamanye amazwe.
Cathay Pacific ICoronavirus Covid-19